Dhimashada oo sare u dhaaftay 31 Qof & Dhaawaca oo la kala guri la’ yahay kadib markii…. – Puntlandtimes
Dhimashada oo sare u dhaaftay 31 Qof & Dhaawaca oo la kala guri la’ yahay kadib markii….
November 12, 2018 Puntland PL
WASHINGTON(P-TIMES)- Tirada geerida ee ka dhalatay gobolka California ayaa korortay waxayna gaadhayna dhimashadu 31 Qof iyo 200 oo kale waa la la’ayaha sida ay xaqiijyeen saraakiisha ku mashquulsan dam damiska dabkaasi.
Lix Qof ayaa la xqiijiyya in ay isku meel kuwada dhinteen Waqooyiga gobolka California, waxaana hada dabka qaxay lagu tilmaamay in uu yahay kii ugu darnaa tan iyo 1933kii oo ay musiibo ka dhacday duleedka magaalada Los Angeles.
Koofurta gobolka California ayaa waxaa laga soo sheegay labo Qof oo isku meel ku geeriyootay iyadoo uu dhaawac weyn kasoo gaadhay magaalada xeebta leh ee Malibu.
Dad lagu qiyaasay 250,000 oo Qof ayaa guryahoodii uga baxay seddaxna jiho ee uu gobolku ka gubanayo xilli ay xoogaysteen dabaylaha uga sii daraya holaca dabka ayaaa guddoomiyaha gobolka California Jerry Brown waxa uu ku booriyay madaxweyne Donald Trump in uu ku dhawaaqo musiibo qaran, taasi oo keeni karta in dowladda federaalku ay kabto miisaaniyada gobolkaasi.
Baaxada dhulka bas beelay ayaa waxaa lagu sheegay 44,000 oo Hiktar welina dabku waa mid sii xoogaysanaya.
Qarax xoog leh oo ka dhacay Muqdisho & Madaxtooyada oo Ammaankeeda la adkeeyey.
DEG DEG+DAAWO: Banaanbaxyadii ugu cuslaa oo ka dhacay Muqdisho “GALI MAYNO IMTIXAAN DAMBE”
DAAWO: Banaanbaxyada Muqdisho oo sii xoogeysanaya “Goodax Ha dhaco, Arday dile Ha dhaco”
Faysal Cali Waraabe Oo Dhaliilay Habkii Loo Xiray Xildibaan Dhakool Xilli Uu Weeraray Muse Biixi